New Day Jobs | How to Improve Yourself to BecomeaNext-Level Professional | Career Blogs
How to Improve Yourself to BecomeaNext-Level Professional
Career Advice 20 Oct 2019
Ep.3 of Career Marathon Series touches on general guidance on how to becomeanext-level professional in your career, and how to succeed in an international company and environment. Transcript in Myanmar is below.
Goldie : : ကျွန်မလက်ရှိ PTTEP Thailand မှာ လုပ်နေပါတယ်။ PTTEP မြန်မာဆိုပြီးတော့လဲ ဝန်ထမ်း ငါးရာနဲ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မ လောလောဆယ် assignment ကတော့ Thailand Bangkok မှာ ၃နှစ် Assignment အလုပ်လုပ်သွားလုပ်နေပါတာ အခု ဆိုရင် ၂နှစ်နီးပါး ရှိပါပြီ။ ရာထူးအနေနဲ့ကတော့ Designated Head of HR ပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ အလုပ်လုပ်သက် စုစုပေါင်း၂၆ နှစ်မှာ HR professional အနေနဲ့ပဲ ၂၃ ကျော်ရှိပါပြီ။
Question : PTTEP Thailand လိုမျိုးနေရာမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အပြိုင်နေရာတစ်နေရာရအောင် ဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့ရလဲ?
Goldie : : အခွင့်အရေးတစ်ခုကို အပြိုင်ရယူရတော့မယ် ကျွန်မရဲ့ ရှေ့တက်လမ်းတွက် လုပ်ရ တော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကိုပဲ ရှာတယ်။ တခြားသူရဲ့ အားနည်းချက်လည်း မရှာဘူး အားသာချက်လည်း မရှာဘူး။ကျွန်မ ကိုယ့်ကိုယ်ကို analyze လုပ်လိုက်တယ်။ review လုပ်လိုက်တယ်။ငါ ဟာ ဒါလိုချင်တယ် ဒါဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက် အဲ့နေရာကို ရောက်အောင် အဲ့ဟာကို ရ အောင်ကြားထဲမှာ ကိုယ်မှာ မရှိတဲ့ gap ကဘာတွေလဲဆိုတာ ရှာတယ်။ Competency လား Skills: soft skill လား hard skill လား ဒါမှမဟုတ်ရင် ကျွန်မမှာ ဘာတွေ လိုအပ်နေသလဲအဲ့တော့ ကိုယ်မှာ လိုအပ်နေတဲ့ gap ကို သိအောင် လုပ်ပြီး ဖြည့်တယ်။ အတက်နိုင်ဆုံး အလျင်မြန်ဆုံး အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင် ဖြည့်တယ်။အဲ့ဟာကို တကယ်လည်း apply လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်။အဲ့တော့ အဲ့လို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြည့်ထားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်မသည် ဘယ်သူ့ကိုမှ ကျွန်မရဲ့ပြိုင်ဖက်လို့သဘောမထားတော့ဘူး။ ငါကအားနည်းနေသလားလို့ မစဉ်းစားတော့ဘူး။ကျွန်မလိုချင်တာနဲ့ ကျွန်မမှာ ရှိတာနဲ့ ဘာ gap ရှိသလဲလို့ပဲ ကျွန်မစဉ်းစားတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ အမြဲ အဲ့လို ဖြည့်တယ်။ စာတွေ ပြန်ဖတ်တယ်။ ကိုယ်တခုခု မသိတာရှိရင် သိတဲ့သူ မေးဖို့ကိုလည်း ကျွန်မ ဝန်မလေးဘူး။ ကျွန်မ အရမ်း Humble ဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ထက်ပဲ အသက် ငယ်ငယ် ကြီး ကြီး ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် မေးတယ်။ မေးလို့မရရင် ရှာဖွေပြီးတော့ ဖတ်တယ်။ကျွန်မ စာဖတ်တာလည်း ဝါသနာပါတယ်။ အဲ့တော့ ကျွန်မရဲ့ ယှဉ်ပြိုင်မှုလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် ကျွန်မ စကားအဖြစ်သာ ပြောလိုက်တာ ကျွန်မ ဒီနေ့အထိ ဘယ်သူကိုမှ မပြိုင်လိုဘူး နောင်လည်း ဘယ်တော့မှ ပြိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
Question : အလုပ်မှာ အဆင်မပြေတာတွေ စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံလာရင် ဘယ်လိုMotivate လုပ်လဲ?
Goldie : : Issue တစ်ခုတက်လာတယ်။ကျွန်မ စိတ်အဆင်မ ပြေတာ တစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်မရဲ့ အရမ်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်ပေါ့နော် အလေ့အကျင့်တစ်ခုက detach လို့ ကျွန်မက အမြဲ ပြောတယ်။ အဲ့ Negative မကောင်းတဲ့ စိတ်အနှောင့်အယှက် မကောင်းတဲ့ စိတ်ခံစားချက် အဲ့ဟာကြီးမှာ ကျွန်မ dwelling လို့ခေါ်တဲ့ အဲ့မှာပဲ တစ်ဝဲလဲလဲ နဲ့ စဉ်းစားတာမျိုးကို မလုပ်ဘူး။ ၂ ချက်ပဲ ကျွန်မ စဉ်းစားတယ်။ကျွန်မ ဖြေရှင်းနိုင်လားနောက်တချက် မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးလား။ ဆိုတော့ ဖြေရှင်းနိုင်တယ် ဆိုရင် ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းကို ရှာရပြီ။ ဟုတ်တယ် ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်မ option တွေ ရှာရပြီ အဲ့ထဲကမှ အကောင်းဆုံး အန္တရာယ် အကင်းဆုံး နောက်တခါ ကျွန်မ လိုချင်တဲ့ results ရနိုင်ဆုံး option ကို ရွေးပြီးတော့ action plan ချလိုက်တယ်။ငါ ဒါလုပ်မယ် ဘယ်နေ့မှ ဘာလုပ်မယ် ဘာတွေ လုပ်မယ် ဆိုပြီး အဲ့တိုင်းလေး လုပ်သွားရုံပဲ ။ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်လို့ ယုံကြည်လို့ plan ချပြီးသွားပြီ အဲ့အတိုင်း လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်လျှင် ဘာဖြစ်လို့ အဲ့ စိတ်ညစ်စရာကြီးမှာ စိတ်ညစ်နေတော့မှာလဲအဲ့တော့ ကျွန်မ detach လုပ်လိုက်တယ်။မစိတ်ညစ်တော့ ဘူး Ok ငါ အဖြေ ရှာပြီး ပြီ အဲ့တိုင်း လုပ်လိုက်တော့တယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး စိတ်ညစ်စရာ အ နှောင့်အယှက်ကြီး မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရုံပဲ ရှိတယ်။ရင်ဆိုင်ရုံပဲ။ အဲ့တော့ ဟုတ်ပြီ ငါ ရင်ဆိုင်ရပြီ ဘာမှလည်း ပြင်လို့ မရတော့ဘူး။ဒီဟာကို ငါခံစားရပြီ ဒါပေမယ့် နောက်တချိန်မှာ ဒီလိုမျိုး အဆိုးမဖြစ်အောင် Lesson learned ဒီထဲက ငါ ပြင်ဆင်ရမှာ ဘာတွေရှိလဲ ဘာတွေ သင်ခန်းစာယူရမလဲ။ ပြီးရင် ကျွန်မ အဲ့တာ မေ့ပြစ်လိုက်ပြီ။ မေ့ပြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကြ တော့ ကျွန်မရဲ့ အ ကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက တော့ အဲ့တာပဲ Detach လုပ်လိုက်တာပဲ။
Question : လူငယ်တွေအနေနဲ့ စစ်မှန်တဲ့ Passion ကို ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
Goldie : : ကျွန်မ မေးခွန်းတစ်ခု လူငယ်တွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးစေချင်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက ဘာလဲဆိုတော့လောကကြီးမှ ငါဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ခွင့် ရတယ်ဆိုရင် ငါဘာဖြစ်ချင်လဲလို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဆိုတော့ အခုက ဘာဖြစ်နေတာလဲ ဆိုတော့ ငါယူထားတဲ့ ဘွဲ့ ငါရထားတဲ့ ပညာရေးနဲ့ ငါ ဒါ လုပ်ချင်တယ် ဒါ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုး များကြတယ်။ တကယ်ဖြစ်သင့်တာက လောကကြီး မှာ ဘာမဆို ငါ လုပ်ခွင့် ရှိတယ်တာဆိုရင်ငါဖြစ်ချင်တာ ဘာလဲ အဲ့လိုတွေးလိုက်ရင် အရမ်း ကျယ်ပြန့် သွားပြီး တော့ကိုယ့်ရဲ့ Passion ကို မြင်လာလိမ့်မယ်လို့ အစ်မက အမြဲ encourage လုပ်ပါတယ်။
Question : အစ်မလိုမျိုး အောင်မြင်တဲ့ Career တစ်ခု တည်ဆောက်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် advice ကဘာဖြစ်မလဲ?
Goldie : : လက်ရှိ အခြေအနေမှ အစ်မမှာ ရှိနေတဲ့ဟာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် အသုံးချတယ်။အခွင့်အရေး တစ်ခုပေါ်လာရင် အခုနက ပြောသလို ငါလိုချင်သလား အခွင့် အရေးကို ယူမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာတွေဖြည့်ရမလဲအဲ့တာတွေ ဖြည့်ဖို့အတွက် ကြိုးစားတယ် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြည့်မလဲ တစ်ခါရလာတဲ့ အခွင့်အရေးကို ကိုယ်က အသုံးချရတော့ မယ်ဟေ့ ဆိုလိုရှိရင် အစ်မရဲ့ တခုတည်းသော အကြံအဉာဏ်က ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကို ထားပြီးတော့သာ အစွမ်းကုန် အားစိုက်ထုတ်ပြီးလုပ် အကောင်းဆုံးလို့ ကိုယ် စိတ်တိုင်းမကျဘူး ဆိုရင်တောင်မှအဆင့်တစ်ခုအထိ ပြည့်စုံတဲ့ result တစ်ခုကို ရမယ်။
Question : နောက်ဆုံး အနေနဲ့ လူငယ်တွေကို အကြံပေးစကားပြောပေးပါဦး။
Goldie : :ဈေးကွက် ထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ နယ်ပယါအတွက် ဘာတွေ လိုအပ်သလဲသိအောင် လုပ်မယ်။ အဲ့အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့ နိုင်ငံမှာ ရှိသမျှ လူတွေ အားလုံးဟာ အမြန်ဆုံး တိုးတက်လာမှာပဲ အဲ့တော့ ဒီတိုင်းကြည့်တယ် ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင် ပြောတဲ့သူတွေ ပြောသွားတာကို နားထောင်ထားလိုက်တယ် ပြီးရင်ကိုယ်ကိုက မကြိုးစားဘူး အားမထုတ်ဘူး Apply မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ အလကားပဲ။ အဲ့တော့ ဒီVideo တွေကို ကြည့်တယ် ဒီChannel တွေဝင်ပြီးကို လေ့လာတယ် အဲ့တာတွေအားလုံးကို ဘယ်နေရာမှာ ကိုယ်က အလျဉ်းသင့်သုံးမလဲကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကိုကော ဘယ်လိုဖြည့်မလဲ အဲ့လိုဖြည့်တဲ့ အခါမှာ ဘယ်သူ့ အကူအညီယူမှာလဲဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ Network ကို ချဲ့ထွင်မလဲ knowledgeတွေSkillsတွေ တက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကို အချိန်ပြည့် အားစိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။
Watch video by clicking here .